Nahoana Winter Train Travel any Italia dia tsy maintsy | Save A Train
Home > Travel Europe > Nahoana Winter Train Travel any Italia dia tsy maintsy
(Last Nohavaozina: 29/01/2020)
Fiaran-dalamby no fomba tsara indrindra mba handeha any Italia na inona na inona ny tonon-taona. Na izany aza, dia hita ho azo antoka kokoa ary mampahazo aina kokoa safidy, indrindra fa mandritra ny ririnina. Winter fiaran-dalamby mandeha any Italia dia tsy azo antoka, fa izay koa haingana sy mahomby.
Ny fiaran-dalamby haingam-pandeha toy ny andalana Trenitalia mihazakazaka tsara teo afovoan'i Italia. Trenitalia dia antsoina hoe Frecciarossa, Frecciargento or Frecciabianca depending on the line. Trains link practically every town or city in Italy, nitondra anareo ho any amin'ny foiben'ny toerana itodiana tsirairay. Ny tena fiatoana no Salerno - Napoli (Naples) - Roma (Roma) - Florence (Florence) - Bologna - Milan (Milan) - Torino (Turin). Roma ho Venice dia malama 3 ora sy 45 minitra fitsidihana raha ny hamandrika avy any Florence ho any Roma dia fotsiny 1 ny ora sy ny 32 minitra.
Noho ny hafainganam-pandeha sy ny tsy hanahirana no fanalahidy ho an'ny ririnina Train Travel in Italia, dia afaka mitsidika ny firenena rehetra ambony toerana haingana sy aina. Ireto ny tanàna dimy ambony mba nandeha tany lamasinina tany Italia ririnina ity.
1. Naples – no fanokafam ho an'ny ririnina Train Travel in Italia
Naples dia tsara ho an'ireo izay te-hiala amin'ny hatsiaka. Tsy azo atao mihitsy talaky masoandro any Naples! Raha ny amin'ny fetin'ny Noely, Naples mamirapiratra ambonin'ny zava-drehetra tanàna hafa any Italia. Manana sary nahabe Noely izay haka ny fofonaina izy. Ho hitanao avokoa izy rehetra eo an-tanàna. Maro no miombon-kevitra fa ny tena tsara tarehiko any Via San Gregorio Armeno.
Roma ny Tuscany dia ambony lalana ao Winter Train Travel any Italia satria dia fohy, ary adiny iray sy sasany mitaingina fiaran-dalamby lasa. Afaka manomboka ny andro renivohitr'i Italia mankafy ny fialan-tsasatra varotra sy mamaly ny Vatican tranombakoka. By antoandro, afaka mitsambikina eo amin'ny fiaran-dalamby sy ny latsaky ny adiny roa, mahita ny tenanao in tarehy Tuscany. Makà mandroboka ao amin'ny mafana rano Spas ny Cap eny ny andro.
Raha mahita ririnina mahonena sy mankahala mangatsiaka kokoa Weather; dia mampiofana Travel ho Palermo. Sisila no afa-mandositra avy nangatsiaka avaratra Eoropa tahaka ny rivo-piainana manome izay mahatsapa ho akaiky kokoa fahavaratra na lohataona. Hianao koa tsy afaka ny tsy ho tia an'i Noely an-tanàna ny tsena, nahaterahanao sary, ary tamin'ny Moyen Âge hatsarany.
Lohany ny avaratra ho any an-tanànan'i Turin raha mangatsiaka tia manao ski ambony getaway no hevitra ny ririnina mahafinaritra. Turin no Winter Train Travel any Italia vavahady ny Alpes. Aza malahelo Luçi d'Artista. Io no vanim-potoana isan-taona kanto fampirantiana Manazava izany ny tanàna amin'ny fametrahana mazava mampitolagaga.
Winter in Venice dia midika hoe madio, miavaka vitsy kokoa ny rivotra sy ny vahoaka mba hanelingelina anao tsy ny hatsaran-tarehiny. Ankafizo ny gondola mitaingina na sip kafe tao amin'ny kianja. Misy foana ny mety hisian'ny mazava orampanala mba hahatonga ny Venice traikefa mahagaga kokoa.
Ahoana no Buy Tickets for ririnina Train Travel in Italia
Mividy tapakila mialoha mahatonga ny fiainanao tsy mampiady saina. Fa lavitra fiarandalamby toy ny Frecciarossa, Frecciargento, frecciabianca, reserved seating is mandatory.
Mividy tapakila mivantana amin'ny gara foana safidy. Na izany aza, ho voaomana ho ela tsipika sy ny fanelingelenana sy ambony ny vidiny. Tamin'ny andro sy ny taona, Izany dia midika hoe ho ny fenitra hamandrika ny fiaran-dalamby seza-tserasera. Raha ny fomba mialoha lavitra dia afaka mividy ny tapakila, ny valiny dia miankina amin'ny karazana italiana fiaran-dalamby.
Frecce fiarandalamby no fiarandalamby haingam-pandeha izay mihazakazaka eo Italia ny tanàn-dehibe. Ianao dia afaka mividy ny tapakila toy ny tany am-boalohany toy ny efa-bolana eo anoloan'ny Travel daty. Vao haingana, Trenitalia nanambara fa mety hampitombo ny famandrihana faravodilanitra ny 6 volana mialoha.
Boky ny seza mialoha, ary ianao dia manan-danja ny sasany hahazo fihenam-bidy. Tena tsara indrindra mba hividy ny tapakila raha antoka ny Travel datin'ny araka discounted sy ny tapakila mialoha izay miavaka dia tsy miovaova, ary tsy averina. Mifandraisa Save A Train na inona na inona fanontaniana amin'ny ririnina fiarandalamby mandeha any Italia.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-train-travel-italy%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / zh-CN ny / en na / fiteny azy sy ny maro hafa.
#traveleurope europeantravel europetravel longtrainjourneys soso-kevitra trainjourney Tranride fiarandalamby tendron'ny fampiofanana fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel fiaran-dalamby Travel torohevitra fiaran-dalamby nankany Travel travelitaly